Ukulawula ii-valves -
ULAWULO LWEVALVELE - IMODYULI 106/206-PR IXESHA LOKUNCIPHA
I-valve yokunciphisa uxinzelelo ilungele ukugcina ngokuchanekileyo uxinzelelo olungezantsi kwevalve. Ivali iphendula uxinzelelo lwenkqubo yehle ezantsi ngonxibelelwano kwindawo ekuphuma kuyo i-valve kunye nenkqubo yokulinga ephendula kwiinguqu ezincinci zoxinzelelo kwaye ilungisa isikhundla sevali ngokumodareyitha uxinzelelo olungaphezulu kwidayalo.
Gcina uxinzelelo oluchanekileyo apha phantsi kwevali
Uphendula ngokukhawuleza nangempumelelo
ULAWULO LWEVALVELE - IMODEL 106/206-PR-48 YOKUNCIPHA IVEKI NGOKUHAMBA KOMNTU NGOKUDLULA
I-valve yokudlula kuxinzelelo lokudlula kwevalve yokuhamba kancinci kukuhamba ngokuthe ngqo kwe-valve yokunciphisa uxinzelelo kunye nokudlula ngendlela, olungele usetyenziso olunemiqobo yendawo. Ngaphantsi kweemeko zokuhamba okuphantsi, ivalve ephambili iyivale kwaye iidlule ihlala ivulekile, ilawula uxinzelelo phantsi kwe-zero flow ngaphandle kokubangela ukuvevezela kwesihlalo.
Igcina ukuhla okuzinzileyo kuye ezantsi kuye zero
Ukuchaneka kunye nokusetwa koxinzelelo oluthembekileyo
Ifanelekile kufakelo lwamathambeka aphezulu
4.9 / 5 ( 9 iivoti )